China 3D Embossed UV Resistance Composite WPC Decking mpanamboatra sy mpamatsy | Lihua
Fananana vokatra: WPC Decking
FANOMEZANA: TT / LC
Vidiny: $ 2,57 / M
Loko: Teak, Brown, Chocolate, Cedar, Arina, sns
Seranan-tsambo fandefasana: Seranan-tsambo Shanghai
Fe-potoana: 10-22 ANDRO
2.4m, 2.9m, 3.6m, na namboarina
● Fametahana WPC fitaovana lehibe indrindra dia PE, kofehy hazo ary additives.Our Fametahana WPC dia malaza eran'izao tontolo izao rehefa mampiasa fitaovan'ny natiora isika.
● Ny volavolan-tsika WPC dia tsara tarehy sy kanto vita amin'ny hazo voajanahary, mifandray amin'ny fametrahana mora foana, amin'izay dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa. Azo aharatra, hombo, hofaina ary hokapaina mba hifanaraka amin'ny kojakoja samihafa, toy ny tontolo, zaridaina ivelany, zaridaina, fivarotana lehibe sns.
● Ny fametahana WPC antsika dia sariaka amin'ny tontolo iainana, azo averina madiodio tanteraka ary tsy misy simika mampidi-doza hafa, tsy mila hosodoko, tsy misy lakaoly ary ambany ny fikojakojana.
● Ny Decking dia manana fahaizan'ny toetr'andro tsara, mety mifanaraka amin'ny -40 ℃ ka hatramin'ny 60 ℃. Ny decking WPC misy azy dia azo ampiasaina eran'izao tontolo izao. .Plus UV additive manao ny board UV fanoherana, manjavona maharitra ary mateza.
Teo aloha: Etsy an-kalamanjana tsy misy triatra & vatokely hazo WPC Decking
Manaraka: Kitapo hazo WPC haingon-trano ho an'ny ivelany
F: Inona ny vokatra azonao? Ahoana no nahatratrarana azy?
F: Hafiriana ny androm-piainan'ny vokatra WPC?
F: fe-potoana fandoavam-bola inona no horaisinao?
F: Raha ampitahaina amin'ny hazo, inona no tombony azo amin'ny vokatra WPC?
F: Mila hosodoko ve ny vokatra WPC? Inona no loko azonao omena?
Fametahana WPC fanangonana
Fametahana Super Embossed
Fanoherana UV WPC decking
Fivarotana UV fanoherana any ivelany ivelan'ny embossed WP ...
Fambolena voajanahary miady an-kalamanjana miendrika valizy ...
fametahana plastika vita amin'ny hazo, Fanapahan-tsokosoko WPC, Fanesorana ivelany WPC, Fanesorana WPC ivelany, Fitaovana WPC, Rihana fametahana WPC,